XOG: Saraakiil ka goostay Dawladda Federalka Soomaaliya kuna biiray mucaaradka (AQRISO). – Soomaali 24 Media Network
XOG: Saraakiil ka goostay Dawladda Federalka Soomaaliya kuna biiray mucaaradka (AQRISO).
Posted on April 26, 2021 Leave a Comment on XOG: Saraakiil ka goostay Dawladda Federalka Soomaaliya kuna biiray mucaaradka (AQRISO).
Wararka laga helayo degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in Taliyihii Saldhigga booliska ee degmada Yaaqshiid Faarax Cadaani Maxamed uu galabta ku biiray ciidamada gadoodsan ee ka soo hor jeeda mudo kororsiga hey’adaha dowladda federaalka ee ku sugan qeybo ka tirsan Muqdisho.
Taliye Faarax oo wata gaadiid dagaal iyo ciidan ayaa la sheegay inuu ku biiray ciidamo ku sugan aagga Mirinaayo, kuwaas oo shalay halkaas dagaal kula galay ciidamo daacad u ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Tallaabada uu galabta qaaday Taliyaha booliska degmada Yaaqshiid waxay ku soo aadeysaa, iyadoo sidaan oo kale uu galabta ciidamada ka gadoodsan mudo kororsiga ugu biiray taliyihii saldhigga booliska degmada Shibis ee gobolka Banaadir sarkaalka lagu magacaabo Farxaan Jaraaye.
Taliye Farxaan Jaraaye ayaa warbaahinta kula hadlay aagga xaafadda Mirinaayo ee degmada Cabdcasiis waxuuna sheegay inuu gartay waxa saxda ah, isla markaana uu ka soo horjeedo gumaadka lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxa uu sheegay uusan is-dhiibin, balse uu ka baaqsanayo in uu dadka iyo dalka u horseedo dagaal sokeeye, isaga oo markii hore ka tirsanaa ciidamada daacada u ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
arrintan ayaa ka dhigan in maanta oo keliya ay garabta dawladda Federaalka Soomaaliya baneeyey laba sarkaal oo ka mid ah Taliyeyaasha booliska degmooyin waqooyi ee gobolka Banaadir.
Saraakiisha ugu sarraysa booliska Soomaaliya oo ayagu si buuxda daacad ugu ah madaxda DFS ayaa wajahaya culays kaga imaanaya saraakiishii ka hoos shaqaynaysay oo maalinba maalinta ka danbeysa ku biiraya dhanka xooggaga muddo kororsiga ka gadoodsan.
← Siyaasiga Axmed Daaci oo Farmaajo u jeediyey hanjabaad la xariirta xiisada kacsan ee Muqdisho
XOG, Ra’iisul wasaare Rooble oo ku baaqay xabbad joojin & shir deg deg ah (AQRISO) →